Ciidamada Madaxtooyada Puntland oo Gadooday – Radio Daljir
Ciidamada Madaxtooyada Puntland oo Gadooday
Oktoobar 20, 2018 8:23 b 0
Wararka ka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland ayaa sheegaya inay gadood sameeyeen saaka Ciidamada Madaxtooyada Puntland , kuwaasoo ka cabanaya mushaar la’aan heysata muddo dhowr bilood ah .
Ciidamadan ayaa waxa ay xireen dhamaan wadooyinka soogala Madaxtiiyada Garoowe, waxaana hakad galay shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee wasaaradaha dowladda .
Shaqaalaha dowladda ayay ciidamadu ka celinayeen in ay galaan xarumaha dowladda.
ilaa iyo hada majirto wax war ah oo ka soobaxay Madaxda ugu saraysa Puntland .
Ma aha markii ugu horaysay oo ay gadood sameeyaan ciidamada Puntland , sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii ciidamada Daraawiishta ee kusugan deegaanka Af-ur ay ka gadoodeen mushahar ka maqnaa bilooyin.
Daljir kala soco wixii ku soo korha warkan
Wasaarada waxbarashada DFS oo sheegtay in ay la soo wareegayso Iskuulada ku yaala maamul goboleedyada dalka